Manome Ratra Hafa Ny Faritra Maitso Ao An-tanàna ny Kaominin’i Beiroty · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Jona 2017 17:37 GMT
Horsh Beirut. Sary nalain'i Whard Sleiman. Nahazoana alàlana ny fampiasàna azy.
Tanatinà fivoriana tamin'ny fiandohan'ity volana ity, nolanian'ny governemanta Libaney ny didim-panjakana iray mikendry ny hamadika ho ara-dalàna ireo trano tsy manara-penitra ao amin'ny ampahanà tany manamorona ny sisin'ny Horsh Beirut, izay faritra maitso lehibe indrindra any Beiroty. Nitranga izao taorian'ny fanapahankevitry ny kaominin'i Beiroty hanova ny fizaram-paritr'ity ampahanà tany ity, izay mety hamela ny fanorenana trano.
Nilaza i Jamal Itani, Ben'ny tanànan'i Beiroty amin'izao fotoana izao, tanatinà tafatafa niarahana tamin'ny gazety mpiseho isan'andro amin'ny teny Frantsay, L'Orient Le Jour, fa nikendry ampahanà tany izay tsy tafiditra ao anatin'ilay valanjavaboary io didy io.
Marina fa tafiditra ao anatin'ny ampahantany ilay izy, saingy tsy ilay valanjavaboarim-panjakana, hoy izy. Misy arabe manasaraka io tany io amin'ilay hazo, izay efa misy toeram-pandevenana sy trano, ny iray amin'ireo dia ho an'ireo Makassed, ary trano fivavahana an'ny fikambanana Cheikh Mohammad Mehdi Chamseddine.
Ho an'i Mohammad Ayoub, filohan'ny Nahnoo (Fikambanana Libaney Tsy Miankina mpiaro ny toeram-bahoaka), tsy mahafa-po ireo tohankevitra ireo na ahoana na ahoana.
Nanazava izy tao anatinà lahatsoratra iray tao amin'ny Facebook fa:
Tian-dry zareo asesika ao an-dohantsika fa telozoro kely monja ao anatin'ny saha maitso ny Horsh Beirut, nefa tsy marina izany. Ilay ampahan-tany voakasiky ny didy dia tafiditra anatin'ny “Ampahantany 1925″ izay ahitàna ala kesika. Nahazo ny fizaram-paritry ny “faritra voajanahary” izy io, izay mandrara ny fanorenana rehetra. Raha nisy trano naorina tao anatiny nandritra ny ady, ilaina ve ny mamadika azy ireny ho ara-dalàna?
Tsy vao sambany izao no voarahon'ny fanorenana ao amin'ny Horsh Beirut. Niteraka hatezerana teo amin'ireo olo-malaza ao amin'ny fiarahamonim-pirenena ilay fanapahankevitra vao haingana noraisin'ny kaominina hanorina hopitaly ao anatin'ny Horsh Beirut. Tamin'ny 9 Febroary, olona an-jatony no nivory hanao hetsipanoherana teo alohan'ny Horsh Beirut ary nangataka ny filankevitry ny tanàna mba hanatsahatra ny pôlitikan'ny “fitsaingohana” miaraka amin'ireo sorabaventy mivaky hoe “faritra voajanahary voaaro ny Horsh Beirut. Alaviro azy ny tetikasanareo”.
Taorian'ireo fihetsiketsehana, nosakanan‘ny kaominin'i Beiroty ny fanorenana. Kanefa, noho ny fanerena ara-pôlitika, niverin-dàlana tamin'ny fanapahankeviny indray izy herinandro monja taty aoriana, tamin'ny alàlan'ny vato 9 manohitra ny hopitaly ary 13 manohana, ka manome alàlana hanohy ilay fanorenana efa nomanina.
Toerana masina mandritra ny fahavaratra
Zava-dehibe ao aminà tanàna toa an'i Beiroty izay miaritra hafanana mahamay amin'ny fahavaratra ireo faritra misy zava-maitso. Nasehon'ny fanadihadiana nataon'i Kaloustian sy Diab fa noho izay antsoina hoe “vokatry ny Fivadihan'ny Tanàndehibe ho tranon-kafanana”, dia mety ahitàna elanelana hatramin'ny 6°C eo amin'ireo toerana misy zava-maitso sy ireo toerana rakotra fanorenana tanteraka, na rakotra amin'ny antsasany, amin'ny fotoam-pahavaratra.
Tsy ny renivohitra Libaney ihany no mijaly amin'ny hafanana tafahoatra mandritra ny fahavaratra sy ny tsy fahampian'ireo faritra maitso. Raha ny marina, tena mila toerana maitso vaovao i Barselòna (tanàna faharoa be mponina indrindra any Espaina) mba hiadiana amin'ny vokatry ny tranon-kafanana ao aminy, hitantana ny fahalotoan'ny rivotra iainana sy ny tabataba, ary hanatsara amin'ny ankapobeny ny kalitaon'ny fiainan'ny mponina.
Izany no nahatonga ny tanàna nanomana tetikasa hamerenana ho maitso indray ny tontolo, mikendry ny hampitombo avo roa heny ny isan'ny hazo ao an-tanàna, hampitombo roa am-pahatelony ny isan'ny valanjavaboary, ary hanome faritra maitso ray metatra toradroa fanampiny ho an'ny mponina tsirairay. Ohatra amin'ny faharanitantsaina izay mety hahasoa ny tanàna hafa ihany koa ny drafitr'ity tanàna ity, izay hanome tontolo maitso 108 hektara amin'ny taona 2019 ary maherin'ny 400 hektara amin'ny 2030.
Raha jerena manokana, mihevitra ny hamorona ‘lalantsara maitso’ ny filànkevitry ny tanànan'i Barselòna mba hampifandraisana ireo valanjavaboary misy ao aminy, hanova ho maitso ny anatin'ny tokotanin'ireo tranobe ao an-tanàna, ary hametrahaka tafo feno zava-maniry.
Raha raisina tsirairay ireo tetikasa kely ireo dia toy ny rano kely mitete ao anaty siny. Ny fitambarany dia hamorona Barselòna izay maitso kokoa, mangatsiatsiaka kokoa, maharitra kokoa ary miaina kokoa.
Nahazo ny anjarany tamin'ireo tetikasa famerenana ny tontolo ho maitso i Beiroty, saingy tsy nisy nahita masoandro ny ankamaroan'ireny. Tamin'ny 2011, teraka ny tetikasa “Liaison Douce” (fifandraisana malefaka) tamin'ny alalanà fifanarahana teo amin'ny faritr'i Île-de-France sy ny filànkevitry ny tanànan'i Beiroty.
Nokendren'ilay tetikasa ny hampifandray ny Horsh Beirut amin'ny afovoantanànan'i Beiroty amin'ny alàlan'ny Arabe Damaskôsy, izay mety ho lasa valanjavaboary lehibe ao afovoan'ny tanàna ahitàna làlana ho an'ny mpitondra bisikilety, ho an'ny mpandeha an-tongotra, ary ho an'ireo fiara fitaterambahoaka.
Rehefa mihatra io tetikasa io, mety hanamora ny fivezivezena amin'ny alàlan'ny fampiasàna ny fitaterambahoaka sy ny bisikilety, mba hampihena ny loza eo amin'ny fivezivezen'ny mpandeha an-tongotra, ny fiarakodia, sy ny bisikilety ary hanaovana faritra fihaonana mahafinaritra eo anelanelan'i Achrafieh sy i Ras el Nabeh ho an'ny mponin'i Beiroty.
Tanatinà tafatafa tamin'ny Septambra 2014, niresaka momba ilay tetikasa i Nadim Abrouizk, lefitry ny ben'ny tanàna tao Beiroty tamin'izany fotoana:
Ny erireritra dia ny hamorona fifandraisana malefaka eo amin'ny Ala Kesika hatrany amin'ny afovoantanàna mandalo ny Arabe Damaskôsy, ka hanome làlana ho an'ny mpitaingina bisikilety sy ny fitaterambahoaka, ary làlana manokana fiampitàn'ny mpandeha an-tongotra. Tetikasa santatra ao an-tanàna izy ity, ary efa nekena ny dingana voalohany amin'ny famolavolàna azy, manantena izahay fa tsy ho ela dia afaka hiroso amin'ny dingana manaraka. Hampifandray ny Tranombakoka Nasionaly Beit Beirut Museum akaikin'ny kianja fanaovana hazakaza-tsoavaly, sy ny Tranombakoka Arkeolojika izay nomanina ho ao amin'ny faritr'i Solidere ity tetikasa Liaison Douce ity.
Nanome fanazavana fanampiny mikasika ilay kianja fanaovana hazakaza-tsoavaly manan-tantara ao Beiroty, izay eo akaikin'ny Horsh Beirut, izy:
Nieritreritra vala tsy misy fanorenana izahay tany am-boalohany, nefa ankafizana ireo hetsika ara-tontolo iainana, ara-javaboary, hetsika fialàna voly sy fizahan-tany ao afovoan'i Beirut. Mifandray tsara amin'i Horsh Beirut izany faritra izany – Ala Kesika, tany mirefy 400.000 metatra toradroa izay akaiky dia akaiky. Ny Arabe Midadasika Omar Beyhum fotsiny no manasaraka azy ireo. Ara-tantara, faritra maitso iray goavana tao an-tanànan'i Beiroty izy. Nahazatra ireo fiara mpanao valala manjohy ny mamakivaky io vala io ary nony nandroso ny fotoana dia niova ho Arabe Midadasika fifamoivoizan'ny fiara haingam-pandeha io làlan'ny fiara mpanao valala manjohy io. Ny tanjonay dia ny hanokatra ity toerana maitso ity indray ho an'ny rehetra eto an-tanàna.
Iray amin'ireo hetsika maro maneho ny hakamoan'ny biraon'ny filànkevitry ny tanàna anefa ity tetikasa ity. Ary toa vao maika miharatsy kokoa ny zava-mitranga noho ny fiakaran'ny hafanàna ao Beiroty vokatry ny fiovaovan'ny toetrandro.
Ho fanaratsiana ny zava-misy, nohidiana vonjimaika ho an'ny vahoaka ny ala kesik'i Beiroty hiezahana hiady amin'ny aretina mahafaty izay mandrahona ireo hazo elo manan-tantara ao aminy.
Namela ireo toerana maitso sisa tavela any Beiroty sy Libana ho eo ambany fandrahonana ny tsy fahaiza-mitantana ny lova voajanahary ao amin'ny firenena, ankoatra ireo tsindry avy amin'ny aretina sy ny fiovaovan'ny toetrandro.
Mety hanontany tena ny vahoakan'i Beiroty ny amin'ny fomba nanomezana fahafahana hiditra tao amin'ny efitra fanapahankevitry ny Kaominina an'ny Beirut Madinati- fampielezankevitra notarihihn'ireo mpirotsaka an-tsitrapo natao mba hifidianana filankevitry ny tanàna ahitàna olona manana firehankevitra pôlitika tsy mifandray, tamin'ny Mey 2016.
Raha ireo fampanantenany hiaro ny lova voajanaharin'i Beiroty sy hanorina tambajotranà zaridainam-bahoaka mifandray, kianja malalaka, sy morondrenirano misokatra ho an'ny daholobe ary lova voajanahary sy ara-taotrano, mety ho hafa ny fisehoan-javatra.